Xildhibaan xisbiga MP ah oo lagu tuhmayo in uu haween xadgudbay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ninkan ayaa barlamaanka u fadhiya xisbiga MP. sawir: Adam Wrafter/SvD/TT
Xildhibaan xisbiga MP ah oo lagu tuhmayo in uu haween xadgudbay
La daabacay tisdag 28 november 2017 kl 14.30
Xildhibaan barlamaanka u fadhiya xisbiga Miljöpartiet ayaa dhowr haween ku xadgudbay shaqadiisa, waxaa af-iswiidhishka lagu yidhaahdo sexuella trakasserier.
In kasta oo uu arrinkani socday muddo gaadhaysa 10 sanno, sida ay gabdhahani u sheegeen, ayaan ninkan wax laga qaban. Halkii la ciqaabi lahaa ayaa shaqooyin kale loo dallacsiiyey. Waa sida ay caddeeyeen gabdhahani.
Markii ay cabashada gabdhahani soo gaadhay hogaanka sare ee xisbigan todobaadkii hore ayaa ninkan shaqada laga joojiyay, waa inta la sugayo natiijada baadhitaanka. Sidaas ayey sheegtay Amanda Lind, xooghayaha xisbiga MP.
Wargeeyska Dagens Nyheter ayaa wareeystay tiro ka badan 20 haween oo wada caddeeynayaa qaabka uu xildhibaankani ula dhaqmi jiray iyaga, tusaale in uu tobankii sanadood ee ugu dambeeyay dhowr jeer xadgudbay,khaasatan haweenka da´da yar.
-Dhibaatada uu ninkan u geeysaneyay haweenkan waa wax ay hogaanka sare ee xisbigani ay la socdeen muddo toban sanno gaadhaysa. Sidaas ayuu caddeeyay siyaasi xisbigan ka tirsanaa wakhti dheer, hasayeeshe rabin in magaciisa la sheego.
Hogaamiyaha xisbiga MP Gustav Fridolin ayaa saaka laga wareeystay barnaamijka P1-morgon. Sidan ayuu yidhi markaa xisldhibaanka wax laga weeydiiyay.
-Xadgudubyadani maaha wax aanu xisbigeena ka aqbalayno. Arrinkan waxaa la ii sheegay todobaadkii hore, islamarkiiba waxaanu furnay baadhitaan sida aanu ogaano side ay wax u dhaceen, ayuu sheegay Gustav Fridolin.